राहतका नाममा राजनीति भयाे – Yug Aahwan Daily
Tuesday 20th October 2020/
घर आगलागीबाट दुई लाखको क्षति
भेरीगंगा झिग्नी र जहरे बजार अनुगमन
दशैँमा पूरा तलव नपाएपछि कर्मचारी क्रुद्ध
ट्याक खुलेको ४१ वर्षपछि कालोपत्रे हुँदै भेडाबारी सडक
नेकपाले दसैँ भत्ता एकमुष्ट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने
सम्पादकीयः बजेट उपलब्ध गराऊ
सांसदलाई दसैं भत्ता फिर्ता गर्न कांग्रेसको निर्देशन
जनप्रतिनिधिलाइ दशै‌ भत्ता
YUGAAWHAN NATIONAL DAILY (2077-07-03)
राहतका नाममा राजनीति भयाे
युग संवाददाता । ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १५:१२ मा प्रकाशित
प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश, नेपाल
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि विपन्न परिवार र मजदुर समस्यामा छन् । मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका परिवारलाई रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ताले सताउने गरेको छ । यतिबेला सरकारी, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट राहत बाँड्ने काम पनि चलिरहेको छ । राहत वितरणकै नाममा राजनीतिकरण भएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । आफ्ना मतदाता र दल निकटलाई मात्र राहत बाँडिएको आरोप लागिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आज हामीले राहत वितरण, सांसदको भूमिका र कोरोना रोकथामबारे कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद पद्मा खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारांश :
लकडाउनको समय कसरी व्यतित् गरिरहनु भएको छ ?
मैले पनि आम नागरिक जस्तै लकडाउनको पालना गरिरहेकी छु । विशेषगरी यो अवस्थामा मैले लकडाउनलाई पारिवारिक बसाइको रुपमा पनि लिएकी छु । अन्य समयमा विभिन्न कामको शिलशिलामा कहिले कतै त, कहिले कतै जानुपर्ने बाध्यताले सपरिवारसँगै बसेर खान पनि नपाउने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले लकडाउनका कारण परिवारसँगै बस्न पाइएको छ । साथै यो समयमा कोरोना संक्रमणको चिन्ता र नागरिकको सुरक्षाबारे पनि छलफल र समन्वय जारी छ । घरमै बसेर भिडियो कन्फ्रेन्सबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि अन्य निकायसँग कोरोना रोकथाम तथा नागरिकको जिविकोपार्जनका विषयमा सल्लाह, छलफल र समन्वय भइरहेको छ ।
अलपत्र परेका मजदुरहरुको उद्दारमा कस्तो पहल गर्नु भएको छ ?
सुर्खेतका हजारौं नागरिक देशका विभिन्न जिल्लामा र अन्य जिल्लाका नागरिक पनि यहाँ अलपत्र छन् । त्यस्तै भारतमा यहाँका नागरिक अलपत्र परेको फोन आउँछ । धन कमाउनकै लागि कामको खोजीमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा भारत छिरेका नागरिक लकडाउनले घर फिर्ता हुन पाएका छैनन् । यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । कामको खोजीमा घर छोडेका नागरिक विभिन्न ठाउँमा अलपत्र हुदाँ उद्दारका लागि पहल नभएको होइन । धेरैको प्रदेश सरकारले उद्दार पनि गरेको छ । तर सबैको उद्दार हुन सकेको छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । अलपत्र परेका नागरिकको भरोसा हामीमाथि छ । त्यसैले पनि अलपत्र नागरिकको उद्दारका लागि पहल नगरी बस्न सकिदैन । र बस्न पनि मिल्दैन । मैले मजदुरको उद्दारका लागि पहल गरिरहेकी छु ।
खाद्य संकट भोगिरहेका नागरिकबारे केही सोच्नु भएको छ त ?
यस विषयमा हामीले गम्भिर भएर सोचेका छांै । लकडाउनको समयमा मात्रै नभएर अन्य समयमा पनि कसरी खाद्य सुरक्षाको रणनीति अपनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे हिजोआज कृषि विज्ञहरुसँगको छलफल जारी छ । तत्कालका लागि जो जसको परिवारमा खाद्य संकट छ । त्यो हटाउन र खाद्यान्न राहत वितरण गर्न सकिएला । तर दिगो रुपमा खाद्य संकट कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने अबको बहस हो । यसतर्फ हामीले सोच्नैपर्ने बेला आएको छ । घरको दक्ष जनशक्ति नै अन्यन्त्र काम गरेर परिवार पाल्छ भने उसले आफ्नै बारीमा उत्पादन किन गर्न सक्दैन ? यो लकडाउनलाई यस्ता बिषयको समिक्षा गर्ने अवसर र तत्काल देखिएका समस्यासँग जुध्न चुनौतीको रुपमा यसलाई मैले लिएकी छु ।
त्यसैले तत्कालका लागि नभई दिगो रुपमा कसरी खाद्य संकट अन्त्य गर्न सकिन्छ र धेरैभन्दा धेरै युवापुस्ता तथा दक्ष जनशक्तिलाई कृषि पेशामा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले रणनीति बनाउँदै छ । साथै यतिबेला विभिन्न बाली लगाउने सिजन पनि भएकाले कृषकलाई अनुदानमा वीउ वितरण गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छांै ।
हिजोआज किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ । यसबारे यहाँहरुको पहल देखिदैन नी ?
यो चाँही दुखको कुरा हो । लकडाउनको बेला कसैलाई तरकारी खान नपाएर हैरान छ । भने कसैलाई तरकारी बारीमै थन्किएको पीडा छ । यस बिषयमा हामीले सुर्खेतका ठुला तरकारी वितरक, पसल र हाटबजार सञ्चालकसँग छलफल गरेका छौं । उनीहरुले किसानको बारीमै गएर तरकारी तथा फलफुल खरिद गरी बेच्ने वातावरण मिलाउन भनेका छौ । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुल रोकेका छौं । अब यहाँको उत्पादनलाई निर्यात गर्नेगरी बढाउन जरुरी छ । यो सिकाइको बेला पनि हो । यसमा मेरो तर्फबाट गर्नपर्ने पहल जारी रहनेछ । तर किसानलाई उत्पादन बढाउन औजार, उन्नत वीउ र बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
यो राहत वितरणमा चाँही किन राजनीति हुन्छ हुन्छ ?
यो राजनीतिका लागि राहत बाँड्ने समय होइन । राहतमा राजनीति गर्ने पनि होइन । यो मानवीयता देखाउने बेला हो । राहतका नाममा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्थानीय सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राहत वितरण गर्ने भन्दै कतिपयले पार्टीको पनि प्रचार गरिरहेको पाईन्छ । राहत वितरणका नाममा हुने जुनसुकै राजनीतिक गतिविधि क्षम्य हुँदैन । राहतको नाममा राजनीतिक रंग देखाउन कार्य बन्द हुनुपर्छ । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो हुन दिनेछैन । एकद्धार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न भुमिका खेलेकी छु । राहत वितरणको लागि कार्यकारी अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । यसको सही कार्यान्वयन हुनेछ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्ना मतदातालाई मात्रै राहत दिने निर्णय गरेपछि मैले समन्वय गरेर सबैले राहत पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरेँ । वीरेन्द्रनगरका मात्रै नभएर कामका लागि यहाँ बसेका सबै नागरिक नेपाली मतदाता हुन् । त्यसैले राहतका नाममा कुनै पनि निकायबाट तेरो र मेरो पार्टी नभनी जसलाई समस्या छ, त्यसलाई दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
मैले आफ्नो क्षेत्रबाट नगर विकासमा भुमिका खेलेकै छु । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सक्ने र उपलब्ध बजेटअनुसार विकासका पूर्वाधार बनाउन र बाँकी नसक्ने प्रदेश तथा संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने मेरो पहल जारी नै छ । नगरपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्था १५ शैयाको बनाउने सरकारको निर्णयअनुसार मैले पनि नयाँ स्वास्थ्य संस्था खोल्नुभन्दा भएका स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमा जोड दिन पहल गरिरहेकी छु । बरु थोरै स्वास्थ्य संस्था खोल्ने तर गुणस्तरीय सेवा दिनसक्ने बनाउन मेरो पहल भइरहेको हो । त्यसैले नागरिकको गुनासोका आधारमा मैले मन्त्रालयमा पहल गर्ने हो । नागरिकको सेवाका लागि मेरो पहल जारी रहनेछ ।